ငယျငယျက ဆော့ခဲ့တဲ့ Bomberman ဂိမျးရဲ့ Battle Royale ဗားရှငျး Bombergrounds – Gaming Noodle
ငယျငယျက ဆော့ခဲ့တဲ့ Bomberman ဂိမျးရဲ့ Battle Royale ဗားရှငျး Bombergrounds
ထှကျထားတာ မကွာသေးတဲ့အပွငျ ဖုနျးတှေ (Android & iOS) ရော PC (Steam) မှာပါ Free ကစားနိုငျတဲ့ ဂိမျးလေးတဈခုနဲ့ မိတျဆကျပေးပါရစေ။
ငယျငယျက Family ဂိမျးခတျေလောကျတညျးက ဆော့လာခဲ့တဲ့ Bomberman ဂိမျးကို မှတျမိကွလားဗြ? နငျတနျးဒိုးလို့ချေါကွတဲ့ SNES မှာတော့ အကောငျသေးသေးလေးတှနေဲ့ ဗုံးတှထေောငျပွီး တဈယောကျနဲ့တဈယောကျ ပွိုငျဆိုငျရတဲ့ ဂိမျးအမြိုးအစားလေးပေါ့။
အခု အဲဒီ Bomberman ဂိမျးဟာ Battle Royale အမြိုးအစားအနနေဲ့ Bombergrounds: Battle Royale ဆိုပွီး ပွနျလညျ ရောကျရှိလာပွနျပါပွီ။
Bomberman ကို မွပေုံကွီးကွီးတဈခုမှာ လူ ၂၅ ယောကျ ပွိုငျတူ Online ဆော့ရတာပါ။ Battle Royale Mode ဆိုတဲ့အတိုငျး စစခွငျး မွပေုံ့ပျေါမှာ Random ကလြာမယျ။ အခငျြးခငျြး ဗုံးထောငျပွီး သတျရမယျ။ မွပေုံကလညျး တဖွညျးဖွညျး ကဉျြးလာမယျ (ကဉျြးလာတော့မယျ့ မွကွေီးအရောငျတှကေ တဖွညျးဖွညျး မညျးလာပွီး ကွှကေသြှားတာပါ)။ SNES တုနျးကတော့ အခြိနျစရေ့ငျ ဘေးမှာ Block တှကေလြာပွီး အလယျကိုပွေးဝငျကွရတာပေါ့။
တဈယောကျခွငျးသာမက Party ဆော့နိုငျပွီး စုစုပေါငျး (၃) ယောကျအထိ တှဲဆော့နိုငျပါတယျ။ Battle Royale Mode ဆိုတဲ့အတိုငျး နောကျဆုံးကနျြတဲ့တဈယောကျက အနိုငျရရှိမှာ ဖွဈပါတယျ။
Character လေးတှအေနနေဲ့ ခဈြစရာ ဝကျဝံ၊ ယုနျနဲ့ ကွောငျ (၃) မြိုးထဲကရှေးခယျြနိုငျပွီး သူတို့ရဲ့ ဝတျစုံတှေ လကျနကျတှေ ဗုံးတှကေို ဝယျယူ အလှဆငျနိုငျပါတယျ။ မဝယျယူလိုဘူးဆိုရငျလညျး ပှဲဆော့တိုငျးရတဲ့ Gold Coin တှကေို အခု (၁၅၀) စုပွီး Basic Treasure Chest ဖောကျလို့ရပါတယျ။ အဲဒီထဲကနေ တပျဆငျရမယျ့ အလှအပ ပစ်စညျးတှအေပွငျ Emoji တှေ အကောငျလေးတှရေဲ့ Facial Expression တှပေါ ပေါကျပါတယျ။
Battle Pass လညျးထညျ့သှငျးထားပမေယျ့ အခုထိတော့ မဝယျယူနိုငျသေးပါဘူး။ Battle Pass ကနေ သငျ့ Character အတှကျ အလှဆငျပစ်စညျးတှေ ရရှိနိုငျမယျလို့ တရားဝငျ website မှာ ဖျောပွထားပါတယျ။
သမာရိုးကြ Bomberman ဂိမျးတှနေဲ့ မတူတဲ့အခကျြက ရိုကျစရာလကျနကျတဈခုပါဝငျတာပါ။ အဲဒီလကျနကျနဲ့ အခငျြးခငျြးရိုကျရငျ ခဏတာ မူးဝသှေားစပေါတယျ။ ဗုံးတှကေိုလညျး ရိုကျထုတျလို့ရပွီး အဝေးရောကျရနျသူတှကေို ဗုံးတှနေဲ့ ကနျထုတျပေါကျကှဲစပေါတယျ။ ဒါဟာ ၂၅ ယောကျတူတူဆော့ရတဲ့ Bombergrounds ကို ပိုပြျောစရာကောငျးပွီး ပွိုငျဆိုငျမှု ပွငျးထနျသှားစတေဲ့ အခကျြတဈခကျြပါပဲ။
ဒါ့အပွငျ ပှဲအတှငျးမှာလညျး သဈသား Box လေးတှပေါရှိပါတယျ။ အဲဒီ Box လေးကိုဖောကျခှဲလိုကျရငျ Power လေးတှရေယျ Star လေးတှရေယျ ကလြာပါမယျ။ ဖိနပျပုံစံ Power လေးကို စားလိုကျရငျ သငျ့ရဲ့ Movement Speed ကို မွနျစမှောဖွဈပွီး ဒိုငျးပုံစံ Power လေးကိုစားလိုကျရငျတော့ သငျ့ကို ဗုံးဒါဏျကနေ ကာကှယျပေးမယျ့ Shield တဈခု ရရှိစမှောပါ။ Star တှကေိုစားရငျ သငျ့ Level တကျတာပိုမွနျစပွေီး Gold Coin တှေ ပိုရစမှောပါ။
Bombergrounds ဟာ လူတျောတျောမြားမြား သိပွီးသား Bomberman ဂိမျးကို Battle Royale ပုံစံလုပျထားတဲ့အတှကျ လူကွီးလူငယျမရှေးဆော့ပြျောတဲ့ ဂိမျးတဈခုဖွဈပါတယျ။ Character လေးတှကေလညျး ခဈြစရာကောငျးတဲ့အပွငျ Gameplay ကလညျး အရမျးကွီးလှယျကူပါတယျ။
Graphic လိုအပျခကျြနိမျ့ပမေယျ့ ရုပျထှကျကတော့ ကွညျ့လို့ရှုလို့ အဆငျပွပေါတယျ။ တျောတနျရုံ ဖုနျးတို့ PC တို့မှာ အထဈအငေါ့မရှိပဲ ဆော့ကစားနိုငျမှာပါ။
အားနညျးခကျြတဈခုကို ထောကျပွရမယျဆိုရငျ တဈပှဲနဲ့တဈပှဲ အရမျးမွနျတာပါပဲ။ စဆော့ဆော့ခငျြးဆို ၅-၁၀ စက်ကနျ့လောကျနဲ့တငျ ဘာမှနျးမသိပဲ သသှေားနိုငျပါတယျ။ တကယျကြှမျးကငျြပွီး Champion ဖွဈသှားရငျတောငျမှ တဈပှဲကို ၂-၃ မိနဈလောကျပဲ ကွာတကျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ဆော့တဲ့သူမြားနတေဲ့အတှကျ တဈပှဲပွီးတဈပှဲ ရှာတဲ့အခြိနျကတော့ မွနျဆနျပါတယျ။
ဘယျကနေ ဒေါငျးလုပျ လုပျနိုငျလဲ?
Android ဖုနျးတှအေတှကျကတော့ Play Store မှာ တရားဝငျ Free Download လုပျနိုငျပွီး apkpure ကနလေညျး ရယူနိုငျပါတယျ။ iPhone သမားတှအေနနေဲ့လညျး App Store ကနေ Free ရယူနိုငိပါတယျ။ PC သမားတှအေနနေဲ့လညျး Steam ကနေ Free Download ရယူနိုငျပါတယျ။ File Size ကလညျး Mobile အတှကျဆိုရငျ 50 MB ပဲရှိပါတယျ။
Bombergrounds ဟာ သူငယျခငျြးတှနေဲ့ဖွဈစေ မိသားစုနဲ့ဖွဈစေ အတူဆော့လို့ကောငျးတဲ့ ဂိမျးတဈမြိုးဖွဈလို့ COVID-19 ကွောငျ့ အိမျတှငျးအောငျနသေူတှလေညျး အပငျြးပွစေနေိုငျပါတယျ။ COVID-19 ဖွဈပှားနပေမေယျ့လညျး Gaming Noodle ကနေ သတငျးတှနေဲ့ အခွားစိတျဝငျစားဖှယျရာ အကွောငျးအရာအသဈတှကေို တငျဆကျပေးသှားဦးမှာမလို့ စောငျ့မြှျောကွညျ့ရှုပေးကွပါ ခငျဗြာ။
ငယ်ငယ်က ဆော့ခဲ့တဲ့ Bomberman ဂိမ်းရဲ့ Battle Royale ဗားရှင်း Bombergrounds
ထွက်ထားတာ မကြာသေးတဲ့အပြင် ဖုန်းတွေ (Android & iOS) ရော PC (Steam) မှာပါ Free ကစားနိုင်တဲ့ ဂိမ်းလေးတစ်ခုနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။
ငယ်ငယ်က Family ဂိမ်းခေတ်လောက်တည်းက ဆော့လာခဲ့တဲ့ Bomberman ဂိမ်းကို မှတ်မိကြလားဗျ? နင်တန်းဒိုးလို့ခေါ်ကြတဲ့ SNES မှာတော့ အကောင်သေးသေးလေးတွေနဲ့ ဗုံးတွေထောင်ပြီး တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ပြိုင်ဆိုင်ရတဲ့ ဂိမ်းအမျိုးအစားလေးပေါ့။
အခု အဲဒီ Bomberman ဂိမ်းဟာ Battle Royale အမျိုးအစားအနေနဲ့ Bombergrounds: Battle Royale ဆိုပြီး ပြန်လည် ရောက်ရှိလာပြန်ပါပြီ။
Bomberman ကို မြေပုံကြီးကြီးတစ်ခုမှာ လူ ၂၅ ယောက် ပြိုင်တူ Online ဆော့ရတာပါ။ Battle Royale Mode ဆိုတဲ့အတိုင်း စစခြင်း မြေပုံ့ပေါ်မှာ Random ကျလာမယ်။ အချင်းချင်း ဗုံးထောင်ပြီး သတ်ရမယ်။ မြေပုံကလည်း တဖြည်းဖြည်း ကျဉ်းလာမယ် (ကျဉ်းလာတော့မယ့် မြေကြီးအရောင်တွေက တဖြည်းဖြည်း မည်းလာပြီး ကြွေကျသွားတာပါ)။ SNES တုန်းကတော့ အချိန်စေ့ရင် ဘေးမှာ Block တွေကျလာပြီး အလယ်ကိုပြေးဝင်ကြရတာပေါ့။
တစ်ယောက်ခြင်းသာမက Party ဆော့နိုင်ပြီး စုစုပေါင်း (၃) ယောက်အထိ တွဲဆော့နိုင်ပါတယ်။ Battle Royale Mode ဆိုတဲ့အတိုင်း နောက်ဆုံးကျန်တဲ့တစ်ယောက်က အနိုင်ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Character လေးတွေအနေနဲ့ ချစ်စရာ ဝက်ဝံ၊ ယုန်နဲ့ ကြောင် (၃) မျိုးထဲကရွေးချယ်နိုင်ပြီး သူတို့ရဲ့ ဝတ်စုံတွေ လက်နက်တွေ ဗုံးတွေကို ဝယ်ယူ အလှဆင်နိုင်ပါတယ်။ မဝယ်ယူလိုဘူးဆိုရင်လည်း ပွဲဆော့တိုင်းရတဲ့ Gold Coin တွေကို အခု (၁၅၀) စုပြီး Basic Treasure Chest ဖောက်လို့ရပါတယ်။ အဲဒီထဲကနေ တပ်ဆင်ရမယ့် အလှအပ ပစ္စည်းတွေအပြင် Emoji တွေ အကောင်လေးတွေရဲ့ Facial Expression တွေပါ ပေါက်ပါတယ်။
Battle Pass လည်းထည့်သွင်းထားပေမယ့် အခုထိတော့ မဝယ်ယူနိုင်သေးပါဘူး။ Battle Pass ကနေ သင့် Character အတွက် အလှဆင်ပစ္စည်းတွေ ရရှိနိုင်မယ်လို့ တရားဝင် website မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
သမာရိုးကျ Bomberman ဂိမ်းတွေနဲ့ မတူတဲ့အချက်က ရိုက်စရာလက်နက်တစ်ခုပါဝင်တာပါ။ အဲဒီလက်နက်နဲ့ အချင်းချင်းရိုက်ရင် ခဏတာ မူးဝေသွားစေပါတယ်။ ဗုံးတွေကိုလည်း ရိုက်ထုတ်လို့ရပြီး အဝေးရောက်ရန်သူတွေကို ဗုံးတွေနဲ့ ကန်ထုတ်ပေါက်ကွဲစေပါတယ်။ ဒါဟာ ၂၅ ယောက်တူတူဆော့ရတဲ့ Bombergrounds ကို ပိုပျော်စရာကောင်းပြီး ပြိုင်ဆိုင်မှု ပြင်းထန်သွားစေတဲ့ အချက်တစ်ချက်ပါပဲ။
ဒါ့အပြင် ပွဲအတွင်းမှာလည်း သစ်သား Box လေးတွေပါရှိပါတယ်။ အဲဒီ Box လေးကိုဖောက်ခွဲလိုက်ရင် Power လေးတွေရယ် Star လေးတွေရယ် ကျလာပါမယ်။ ဖိနပ်ပုံစံ Power လေးကို စားလိုက်ရင် သင့်ရဲ့ Movement Speed ကို မြန်စေမှာဖြစ်ပြီး ဒိုင်းပုံစံ Power လေးကိုစားလိုက်ရင်တော့ သင့်ကို ဗုံးဒါဏ်ကနေ ကာကွယ်ပေးမယ့် Shield တစ်ခု ရရှိစေမှာပါ။ Star တွေကိုစားရင် သင့် Level တက်တာပိုမြန်စေပြီး Gold Coin တွေ ပိုရစေမှာပါ။
Bombergrounds ဟာ လူတော်တော်များများ သိပြီးသား Bomberman ဂိမ်းကို Battle Royale ပုံစံလုပ်ထားတဲ့အတွက် လူကြီးလူငယ်မရွေးဆော့ပျော်တဲ့ ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Character လေးတွေကလည်း ချစ်စရာကောင်းတဲ့အပြင် Gameplay ကလည်း အရမ်းကြီးလွယ်ကူပါတယ်။
Graphic လိုအပ်ချက်နိမ့်ပေမယ့် ရုပ်ထွက်ကတော့ ကြည့်လို့ရှုလို့ အဆင်ပြေပါတယ်။ တော်တန်ရုံ ဖုန်းတို့ PC တို့မှာ အထစ်အငေါ့မရှိပဲ ဆော့ကစားနိုင်မှာပါ။
အားနည်းချက်တစ်ခုကို ထောက်ပြရမယ်ဆိုရင် တစ်ပွဲနဲ့တစ်ပွဲ အရမ်းမြန်တာပါပဲ။ စဆော့ဆော့ချင်းဆို ၅-၁၀ စက္ကန့်လောက်နဲ့တင် ဘာမှန်းမသိပဲ သေသွားနိုင်ပါတယ်။ တကယ်ကျွမ်းကျင်ပြီး Champion ဖြစ်သွားရင်တောင်မှ တစ်ပွဲကို ၂-၃ မိနစ်လောက်ပဲ ကြာတက်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဆော့တဲ့သူများနေတဲ့အတွက် တစ်ပွဲပြီးတစ်ပွဲ ရှာတဲ့အချိန်ကတော့ မြန်ဆန်ပါတယ်။
ဘယ်ကနေ ဒေါင်းလုပ် လုပ်နိုင်လဲ?
Android ဖုန်းတွေအတွက်ကတော့ Play Store မှာ တရားဝင် Free Download လုပ်နိုင်ပြီး apkpure ကနေလည်း ရယူနိုင်ပါတယ်။ iPhone သမားတွေအနေနဲ့လည်း App Store ကနေ Free ရယူနိုငိပါတယ်။ PC သမားတွေအနေနဲ့လည်း Steam ကနေ Free Download ရယူနိုင်ပါတယ်။ File Size ကလည်း Mobile အတွက်ဆိုရင် 50 MB ပဲရှိပါတယ်။
Bombergrounds ဟာ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ဖြစ်စေ မိသားစုနဲ့ဖြစ်စေ အတူဆော့လို့ကောင်းတဲ့ ဂိမ်းတစ်မျိုးဖြစ်လို့ COVID-19 ကြောင့် အိမ်တွင်းအောင်နေသူတွေလည်း အပျင်းပြေစေနိုင်ပါတယ်။ COVID-19 ဖြစ်ပွားနေပေမယ့်လည်း Gaming Noodle ကနေ သတင်းတွေနဲ့ အခြားစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ အကြောင်းအရာအသစ်တွေကို တင်ဆက်ပေးသွားဦးမှာမလို့ စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပေးကြပါ ခင်ဗျာ။